Kelitalisnimada Riyaale iyo golihii Maanta: “Adeer waad edeb daran tahaye Fadhiiso.. Bilaa edebyahow Aamus,” Madaxweyne Riyaale | Somaliland.Org
April 30, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Golihii keli ahaa ee Shacbiga Somaliland sida dimuqraadiga ah u soo doortay, isla markaana ahaa astaan u taagan dimuqraadiyadda Somaliland ayaa ogolaaday inuu hoggaamiyo fadhi la mid ah golihii Shacabka ee Siyaad Barre, isla markaana dhegeysto khudbad keli-taliye aanay wax qiimo ah ugu fadhiyin Wakiillada la soo doortay iyo xuquuqdooda dimuqraadiyadeed ee ay ku camalfalaan golahooda dhexdiisa iyo guud ahaan xaqa ra’yi dhiibashada.
Hase yeeshee, fursaddaas kama faa’iideysan Golaha Wakiilladu. Waxay dhegeysteen Khudbad la mid ah tii Fidal Castro ee Lixda saacadood uu keligii hadli jirey; waxayna ku hafteen sacabka xaynta Wasiirrada ah ee la socotey Madaxweynaha iyo golaha aan la soo dooran balse, ku jooga qalankiisa, mid mid isku deyey inay hadlaanna waxa loo canaantay sidii Ilma yar oo malcaamad qur’aan fadhiya.
Ka sokow, ciidamada iyo tiknikada ku xeernayd golaha iyo hareerihiisa iyo baadhista humaajida wadata ee ilaalada Madaxweynuhu ku samaynayeen xildhibaan kasta marka uu gelayo hoolka shirarka, golaha dhexdiisa ayaa fadhigu waxa uu ahaa mid aan dimuqraadiyad shaqo ku lahayn, isla markaana ay sahlanayd in ilaalada Madaxweynuhu ay gacanta ula tagaan oo ay dibada u tuuran xildhibaanka hadla.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa ugu horrayn mudanayaasha ku wargeliyey in Madaxweynuhu jeedin doono khudbaddiisii sannadka, isaga oo weliba tixraacay qodobka dastuurka ee Madaxweynaha ku waajibinaya inuu khudbad u jeediyo labada gole sanad kasta kalfadhiga ugu horreeya, iyada oo hadda ay bilaabmayso bishii Shanaad ee Sannadku, isla markaana ay ugu dambeysey khudbad sannadeed uu jeediyo sannadkii 2005. Waxa kale oo uu u sheegay xildhibaanada in Madaxweynuhu ka cudurdaartay in su’aalo la weydiiyo. Waxaana halkaas ka bilaabmay buuq mudanayaal oo door ah oo labada goleba isugu jira, balse, u badan Golaha Wakiilladu ay ku diidanaayeen cudurdaarkaas, kaas oo Madaxweyne Riyaale ka hakiyey dhawr goor khudbaddiisa, isla markaana uu cadho iyo dulqaad yaraan u muujiyey.
Dood dheer oo qaddar hakisay inuu Madaxweyne Riyaale gudagalo khudbaddiisa kadib, xildhibaanada qaarkood ayaa marba su’aal ku tuurayey ku saabsan mawduuca uu ka hadlayo.
“Waar Adeerow waad edeb daran tahaye fadhiiso, bilaa Edeb baad tahaye aamus!” sidaa waxa yidhi Madaxweyne Riyaale oo Xildhibaan ka mid ah Golaha Wakiilladu su’aal ku soo tuuray, markii uu ilaa 7 daqiiqadood khudbaddiisa ku gudajirey.
Madaxweyne Riyaale uma muuqan masuul marti u ah gole lamid ah ka uu guddoomiyo, isla markaana erayadaa cayda ah ee cadhada leh, ka sokow waxa la maqlayey marar badan isaga oo Shirguddoonka u tilmaamaya inuu dibadda u saaro xildhibaanada doonayey inay su’aalaha weydiiyaan Madaxweynaha ama su’aalahooda iyo dareenkooda kaga dhawaaqayey golaha dhexdiisa.
Dareemadaas iyo su’aalahaasina waxay ahaayeen kuwo ka dhalanayey khudbadda Madaxweynaha iyo fursadda loo siiyey inuu weeraro, naqdiyo, isla markaana aflagaadeeyo hoggaamiyayaasha siyaasadeed ee ka soo horjeeda iyo hay’ado caalami ah iyo kuwo waddani ah iyo weliba doodda uu isku difaacayo oo ah mid sharci ahaan iyo caqli ahaanba wax la iska weydiin karo.
“Adeer waad edeb daran tahaye Fadhiiso. Bilaa edebyahow Aamus” – Riyaale April 29, 2008
Si kastaba ha ahaatee, Golaha Wakiillada iyo Shirguddoonkiisa waxay muuqatey in aanay hore waxba isaga weydiin ka qaybgalka fadhigaas, isla markaana uu isku maax dumiyey gole aanu milgo ku lahayn. Waxa iyana caalamad su’aal la gelin karaa Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, mudane Cabdiraxmaan Cirro oo beryahan ku hawlanaa dhexdhexaadin uu ugu kala dabqaadayey Madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaridka ah.
Dhinaca kale, fadhigani waxa uu qaawiyey kelitalisnimada iyo kibradda ku jirta Madaxweyne Riyaale oo khudbaddiisa iyo hab-dhaqankiisa golaha hortiisaba ay ka muuqatey weerar iyo wax-iska-celin, aan haba yaraatee tixgelin sida dooddiisu ay dadka ugu cuntamayso.